Kidnapping an’i Chandarana Rishi : Ny fiarany ihany no nitondran’ireo jiolahy azy -
AccueilSongandinaKidnapping an’i Chandarana Rishi : Ny fiarany ihany no nitondran’ireo jiolahy azy
Nitovy tsy nisy valaka tamin’ny raharaha kidnapping an’i Navage Veldjee teny Ampasampito no nataon’ireo jiolahy nanao fakana an-keriny an’i Rishi Chandarana ny alahady tolakandro lasa teo. Araka ny loharanom-baovao avy eo anivon’ny zandarimariam-pirenena, dia ny fiara 4×4 Touareg nentiny ihany koa mantsy no nitondran’ireo olon-dratsy ity zanaka mpandraharaha tompon’ny hotely “Le Grand Méllis” etsy Tsaralalàna ity. Raha ny fantatra, dia jiolahy efa-dahy nirongo basy kalaky ary nitondra fiara 4L fourgonette no naka an-keriny sy nibeda an’i Rishi Chandarana raha iny izy nametraka fiara teo amin’ny toerana fijanonana eny amin’ny Golf Andakana Ambohidratrimo iny. Tsy nijanona ela teny an-toerana ireo olon-dratsy fa nirifitra avy hatrany nihazo an’an-drenivohitra niaraka tamin’ity niharan-doza ity taorian’izay, izay mbola tsy nandrenesam-baovao hatramin’ny omaly. Nanao ny ezaka rehetra tamin’ny fanaovana savahao ny toerana manodidina moa ireo mpitandro filaminana hitadiavana sy hanarahan-dia ireo jiolahy vantany vao naharay antso, saingy tsy nahitana mangirana izany.
Tao anatin’ny herintaona latsaka kely, dia efa indroa niharan’ity asa maloto ity io fianakaviana karana mizaka ny zom-pirenena frantsay io. Raha tsiahivina mantsy, dia vao ny 07 jona 2017 no nobataina efa-dahy nandeha moto cross sy nitondra fitaovam-piadiana mahery vaika teny Behoririka ny rainy, raha handeha hamonjy ny toeram-piasany, ary izao lasibatra izao indray ny zanany. Araka ny fanadihadiana natao tamina tompon’andraikitra iray avy eo anivon’ny polisim-pirenena, dia antony isan’ny hanaovan’ireo jiolahy tampody fohy ny fianakaviana iray matetika ny fanarahan-drenirano izay lazain’ireo mpaka an-keriny sy ny fanomezana ireo vola be tadiaviny, izay sokajiana ho isan’ny fototra goavana mampirongatra ity asa ratsy ity. Raha resaka tsy fandriam-pahalemana ohatra ny asa ratsy rehetra no nandraisan’ny olona ny resaka kidnapping teo alohan’ilay hetsika natao vao tsy ela akory izay, dia efa manomboka resy lahatra ny rehetra fa mety resaka valifaty eo amin-dry zareo karana ihany no ao ambadik’izany raha ny fisesisesiny no jerena. Marihina fa efa misy sampandraharaha manokana miady amin’ity raharaha fakana an-keriny ity eto amintsika, ary izy ireo no mandray an-tanana ny fanadihadiana sy ny fikarohana rehetra mahakasika an’i Navage Veldjee sy Rishi Chandarana, izay samy eny am-pelatanan’ny jiolahy amin’izao fotoana izao.